Ogaden News Agency (ONA) – Ethiopia Maxaa iska badalay Dhimashadi Zenawi Kadib
Ethiopia Maxaa iska badalay Dhimashadi Zenawi Kadib
Mudadii Kaligii taliye Zenawi baqtiyay kadib. Waxaa Ethiopia la rajeynayay in isbadal siyaasadeed kadihici doono Ethiopia. Midaas oo wadamada ree galbeedku rajeynayeen iyaga oo u aaneyn jiray kaligii taliye Zenawe innuu ahaa ninka qaska iyo budhcadnimada kawada Ethiopia. Hadaba dhimashadiisi kadib maxaa ka dhacay Ethiopia oo isbadal ah?
Dadka siyaasada Ethiopia odoroseeya waxay xaqiijiyeen in wax isbadal ah ka dhicin Ethiopia gaar ahaan qaabka maamul ee taliska Ethiopiana innuu lamid yahay kii hore ee Kaligii taliye Zenawi midkaas oo ku dhisnaa wax burburin, xasuuq, musuqmaasuq iyo cadaalad daro. Sidoo kale xidhiidhkii wadamada reegalbeedka iyo Ethiopia ka dhaxeeyay waa qaabkii hore ee kaligi taliye Zenawi kula dhaqmi jiray.
Haile Marium Desalegh
Dhimashadii Zenawi kadib waxaa Jagada raisal-wasaaraha loo dhiibay nin aan kasoo jeedin qowmiyada tigreega, dhacdadaas oo loo arkay in isbadal weynu horseedi doonto Ethiopia. Mudadii uu xilka hayay oo sanad gaadhaysa eega, xayle Maryum waxa uu dibu shaandheyn ugu sameeyay wasiirada dowladiisa, arrintaas oo loo arkay in isbadal noqon karto oo nin aan kasoo jeedin qowmiyada Tigreegu awood iyo saameyn ku yeelan karo talada Ethiopia. Balse waa lagu hungoobay. Iskushaandheyntaas waxa ay aheyd talo katimid Xisbiga Woyanaha ee TPLF.
Taliska Woynaha Ethiopia (TPLF) waxay isbadal kusameeyeen oo badaleen awooda raisal wasaaraha, waxaana laga qaaday awoodi uu lahaan jiray raisul wasaaruhu waqtigii kaligi taliye Zenawi oo kale, waxaana awoodisa laga dhigay mid la qeybsado iyada oo nidaam ahaan loo ekeysiinayo in talada wadanku uu kasoo go’o xisbiga EPRDF xisbigaas oo taladiisa iyo hoggaamintisaba TPLF iska leedahay. Midaas oo ka dhigaysa Xalyle Marium nin maqaar saar ah oo shaqadiisu tahay kaliya nin shaqaale ah oo shaqooyinka maalmeedka ah guta balse wax go’aan qaadasho ah ama qorshe howleed ah oo uu sameynkaro aysan jirin isaga oo ka heysan amar jabhada tigreega ee TPLF.
Habdhaqanka Xayle Mariyum markuu kusuganyahay guriga baarlamaanka waa ka duwanyahay kii hore ee Zenawi. Waxaa ka muuqada Xaylemarium kalsooni daro ah innuusan go’aan adag kaso jeedin karin golaha baarlamaanka dhexdiisa, halkii hada ka hor kaligi taliye Zenawi ahaa ninka markuu hadlo hadalkiisa aan hadal ka danbeyn jirin.
Banaanbaxyo ka socda Ethiopia
Baqtigii Zenawi kadib waxaa dhulka Ethiopia ka socda banaanbaxyo xoog badan oo looga soo horjeedo gumeysiga ethiopia midkaas oo sii xoogaysanaya maalinba maalinka ka danbeeya. Waxaa lagu tilmaamay in Taliska Woynaha uu yahay mid aad u tabar daran oo wali kasoo kabanin dhimashadii Zenawi, islamarkaasna looltan siyaasadeed uu ka bilowday xisbiga tigreega dhexdiisa midaas oo sababtay in Xisbiyadii kale ee kacaanka u ahaa TPLF inay iyana u hanqal taagaan inay cadkooda goostaan oo ka faa idyestaan qalalaasaha ka dhex abuurmay TPLF. Sidaas awgeed waxaa taliska Woyanaha ku adkaatay in markiiba ka hortagaan banaanbaxyada ka socda guud ahaan dalka Ethiopia midaas oo la odhan karo waxaa qeybo ka ah, xisbiyada kacaanka u ah TPLF ee bahwadaaga kula ah EPRDF.
TPLF waxa ay markiiba ku eedeyasay in dhaqdhaqaaqa muslimiinta Ethiopia banaanbaxyada iyo kacdoonka la hor istagai kari la’yahay inay ka danbeeyaan siyaasiyiin meel sare ka jooga taliska Woyanaha oo kasoo jeeda Qowmiyada Oromada. Waxaana markiiba xabsiga loo taxaabay siyaasiyiin badan oo Oromo ah oo Gaalo iyo Muslimiinba leh. Waxaa xabsiga la dhigay dhamaanba Imaamyadii kasoo jeeday qowmiyada Oromada oo si gaar ahaan loo toocsaday. Arrintana waxay ka dhex aloostay Ethiopia dhexdeeda daggaal siyaasi oo ka xoog badan midka banaanbaxyada muslimiinta Ethiopia isugu soo baxayaan, shacabka Oromada ayaa u arka in Woyanaha intaas ka badan loo dulqaadan karin gaar ahaan kuwii kacaanka u ahaa ee la shaqeyn jiray Woyanaha ayaa ka horyimid sayidkoodi tigreega ahaa ee ay u adeegi jireen.
ONLF Iyo Woyanaha
Kadib markii Woyanuhu oggaaday in burbur adag kusoo fool leeyahay, siyaasiyiinta TPLF waxay bilaabeen in ay meel mariyaan heshiis dhab ah oo lala yeesho Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya oo iyadu ah xooga ugu weyn ee hubeysan ee ka daggaalama geeska Afrika. Jabhada ONLF waxay u arkeen in jaanis badan u heli karaan in si dhibyar kusoo qaadan daggaal Ethiopia oo idil ku wajahan oo Caasimada Addis Ababa kuqabsadaan iyaga oo ka faa ideysanaya kacdoonka Ethiopia ka jira. Jabhada ONLF ayaa waagi hore loo arki jiray inaysan Caasimada Addis Ababa soo gaadhi karin maadama oo isir ahaan ka gadisanyihiin shucuubta Ethiopia oo isku af iyo dhaqan aysan wadaagin. Siyaasada eega ka taagan Ethiopia waxa ay keentay in mucaaradka Ethiopia oo idil ugacan haadiyo Jabhada ONLF lana siiyo jid ay ku gaadhi karaan dhulka sare ee Ethiopia iyaga oo heshiisyo la sameystay qowmiyadaha Orormada iyo Axmaarada oo iyaguna ku jira waqtigan daggaal hubeysan.
Si taas loogahortago Siyaasiyiinta Tigreegu waxay iskudayeen inay Jabhada ONLF u oggoladaan wadahadal siyaasi ah oo looga xaajooda Qadiyada Ogadeniya. Hoggaamin la’aanta iyo khilaafka loolan ee ka dhex jira Jabhada TPLF dhexdeeda waxa ay ku guuleysan waayeen in siyaasiyiinta TPLF iyo Saraakiisha Tigreegu ku heshiinwaayaan qaabkii wada xaajoodkaas loogu guuleysan lahaa, Saraakiisha Tigreega ayaa laftigoodu raba inay talada xisbiga TPLF awood sare ku yeeshaan halka siyaasiyiin kale oo badan oo TPLF ah isku heystaan. Heshiiski fashilmay ee TPLF rabtay in ONLF kula hadasho waxa uu muujinaya tabar xumida iyo hoggaan la’aanta ka jirta taliska Woynaha midaas oo soo dadajin karta burburka Woyanaha.
Wadanka Ethiopia oo ah gacanyaraha wadamada ree galbeedka. Ethiopia waxay wadamada ree galbeedka u fulisa dano badan oo kamid yihiin dhanka la daggaalanka argagaxisada iyaga oo sidoo kale u adeegsada Ciidanka Ethiopia oo ay tababaro siiyeen sidii wadamada kale ee Africa Sida Sudan oo kale loogu geyn lahaa arrimo amni sugineed (peacekeeping Force). Sidaas awgeed waxaa walbahaar badan laga qabaa in si dhibyar wadanka Ethiopia u burburo lana waayo talis fulinkara danaha wadamada Ree galbeedka.
Si taas looga hortago waxaa marar badan wadanka Ethiopia soo booqday intii uu baqtiyay Kaligi taliye Zenawi siyaasiyiin sare oo kamid ah wadamada ree galbeedka oo leh madaxweynayaal, Hoggaamiyaal, haayadaha amniga, Saraakiil ciidan. Waxaana kamid ah dadkaas yimid Madaxweynaha wadanka Germany, Hoggaanka gaashaandhiga wadanka USA, haayado kale oo kasocda EU, iyo UN-ta intaba. Waxaana dhamaantood ay kala hadlayeen talisk Woyanaha sidii shacabka Ethiopia waxa ay rabaan loogu sameyn lahaa cadaalad loogu heli lahaa ka hortagta burburkakusoo wajahan Ethiopia.
Taliska Woyaaha oo ka faa ideysanaya jaanisyadan waxay hadiyo jeer ka codsadaan wadamada ree galbeedka deeq lacageed oo ay ku xoojiyaan ciidankooda si gudaha ethiopia amnigiisa u sugaan, lacagahaasna waxay u adeegsadaan sidii ay ku xasuuqi lahayen shacabka iyaga oo ree galbeedka u sheegaya inay tahay arrimo la xidhiidha sugida amniga.
Waxaa lasoo xaqiijiyay oo doodo badan ka socdaan ku tumushada xuquuqda aadamaha ka jirta Ethiopia iyo kaalinta ay ku leedahay deeqda lacageed ee Ethiopia ka hesho wadamada ree galbeedka.
Sidoo kale waxaa wadamada ree galbeedku ay baadhitaan ugu jiraan hadii taliska Woyanuhu burburo sidii loo heli lahaa mid kale oo badala taliskaas iyada oo aysan dhicin aafo lamid ah tii somalia ka dhacday oo kale. iyaga oo cabsi ka qaba wadanka labaad ee ugu tiro badan Afrika in shacabkiisu qaxaan.